डाउनलोड गर्नुहोस् Google Play Store APK को लागी Android
सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहोस् को लागी Android (24.54 MB)
डाउनलोड गर्नुहोस् Google Play Store,
एन्ड्रोइड प्रोसेसरहरू प्रयोग गरेर मोबाइल फोनहरूको लागि डाउनलोड स्टोरलाई गुगल प्ले भनिन्छ। तपाईंले आफ्नो जीवनलाई सजिलो बनाउने सयौं अनुप्रयोगहरू मध्ये कुनै पनि डाउनलोड गरेर तुरुन्तै प्रयोग गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। स्मार्ट मोबाइल फोनहरू, जुन युगको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकताहरू मध्ये एक हो, डाउनलोड गरिएका अनुप्रयोगहरूसँग प्रयोगलाई अझ व्यावहारिक बनाउँछ। गुगल प्ले स्टोर एन्ड्रोइड संग मोबाइल फोन को स्टोर हो। गुगल प्ले स्टोर डाउनलोड - तपाईंले प्ले स्टोर समस्या र समाधान शीर्षकको यो समाचारमा विवरणहरूको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ।
गुगल प्ले स्टोर के हो?
Google द्वारा विकसित, प्ले स्टोर एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम संग मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। त्यहाँ स्टोरमा धेरै नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू छन्, साथै सशुल्क अनुप्रयोगहरू। जब तपाइँ नि: शुल्क अनुप्रयोगहरूमा क्लिक गर्नुहुन्छ, स्थापना प्रक्रिया सीधा सुरु हुन्छ। यद्यपि, भुक्तान गरिएकाहरूको लागि, तपाइँको क्रेडिट कार्ड जानकारी अनुरोध गरिएको छ। तपाईंले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा पोस्ट-पेमेन्ट अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्नको लागि, तपाईंले पहिले आफ्नो फोनमा गुगल प्ले स्टोर स्थापना गर्नुपर्छ। डाउनलोड गरेपछि, तपाईले चाहानु भएको अनुप्रयोग चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
गुगल प्ले स्टोर कसरी प्रयोग गर्ने?
तपाईको जीमेल खाता जानकारी प्रविष्ट गरेर तपाईको स्मार्टफोनमा गुगल प्ले अनुप्रयोग डाउनलोड गरेपछि, गुगल प्ले प्रयोगको लागि तयार छ। तपाईं सजिलैसँग अनुप्रयोगको शीर्षमा रहेको खोज खण्डबाट आफूले चाहेको खेल र विभिन्न अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले डाउनलोड गर्नुहुने एप्लिकेसनहरूका लागि तपाईंले सकारात्मक वा नकारात्मक टिप्पणीहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं अनुप्रयोगहरूको लागि मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, जब तपाइँ एक संगीत डाउनलोडर प्रोग्राम वा नोटप्याड डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईले धेरै विकल्पहरू देख्नुहुनेछ। र्याङ्किङमा, प्रयोगकर्ताहरूबाट उत्कृष्ट कमेन्ट र लाइक प्राप्त गर्ने एपहरू र्याङ्किङको सुरुमा छन्।
तपाईंले टिप्पणी र लाइक गरेर तपाईंलाई मनपर्ने वा मन नपर्ने अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्ने निर्णय गर्न अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल प्ले स्टोर प्रयोग गर्नु अघि खाता सिर्जना गर्नुपर्छ। एन्ड्रोइड उपकरण (फोन, ट्याब्लेट) प्रयोग गर्नेहरूले सजिलै कार्यक्रम लिन सक्छन्। कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निःशुल्क छ। कार्यक्रममा हजारौं सशुल्क र निःशुल्क अनुप्रयोगहरू समावेश छन्।
Google Play Store APK डाउनलोड र स्थापना प्रक्रियाहरू
पहिले, Google Play Store को नवीनतम संस्करण डाउनलोड गरिएको छ। माइक्रोएसडी वा आन्तरिक भण्डारण फोन मेमोरीमा डाउनलोड गरिएको एक्सटेन्सन ".apk" भएको फाइल खारेज गरिएको छ। तपाईले जान्न आवश्यक छ कि APK फाइल नयाँ फोल्डरमा छ। "सेटिङ्हरू> सुरक्षा> अज्ञात स्रोतहरू" ट्याबमा स्रोतहरू सक्रिय गरेपछि, तिनीहरू स्थापना प्रक्रियामा स्थानान्तरण हुन्छन्। तपाईंले एपीके फाइल स्थापना गर्नु अघि तपाईंको एन्ड्रोइड उपकरणमा फाइल प्रबन्धक हुनुपर्छ। लगभग सबै एन्ड्रोइड उपकरणहरूको आफ्नै फाइल प्रबन्धक छ। डाउनलोड प्रक्रिया फाइलहरूमा फोल्डरमा एपीके फाइल चयन गरेर सुरु हुन्छ। डाउनलोड पछि, गुगल प्ले स्टोर स्थापना हुनेछ।
Google Play Store APK अपडेट प्रक्रियाहरू
यदि तपाईंलाई गुगल प्लेसँग समस्या भइरहेको छ भने, यो कार्यक्रम अद्यावधिक नभएको कारणले हुन सक्छ। तपाईंले यो समस्या समाधान गर्न केही चरणहरूमा अद्यावधिक अपरेसनहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ:
पहिले, Google Play खातामा लग इन गर्नुहोस्।
अद्यावधिक गर्न आवेदन चयन र जारी छ।
बायाँको मेनुबाट APK चयन गरिएको छ।
उप-श्रेणी मेनुमा संस्करणहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्।
यहाँ APK को बारेमा उपलब्ध जानकारी छ, जस्तै यसले कति यन्त्रहरूले समर्थन गर्दछ, संस्करण नम्बर।
तपाईंले तयार र हस्ताक्षर गरिएको APK डाउनलोड गर्नुहोस् क्लिक गरेर स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
एपीके स्थापना बटनको छेउमा, पुस्तकालयबाट स्थापना बटन पनि छ।
यदि बीटा वा अल्फा परीक्षणका लागि अपलोड गरिएका एपीकेहरूसँग कुनै समस्या छैन भने, यदि तपाइँ स्थापित एपीकेसँग जारी राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ पुस्तकालयबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि एपीके सफलतापूर्वक स्थापना गरिएको छ भने, दायाँमा स्क्रिन देखा पर्नेछ। यहाँ हामी ड्राफ्ट बचत गर्नुहोस् क्लिक गरेर अघिल्लो स्क्रिनमा जान्छौं।
तपाईंले आफ्नो संस्करण नम्बर लेख्न आवश्यक छ जहाँ यसले पृष्ठको तल संस्करणको नाम भन्छ।
यस संस्करणको आविष्कार खण्डमा थपिएका नयाँ सुविधाहरू लेखिएका छन्।
सेभ बटन थिच्नुहोस्। बचत प्रक्रिया पछि, समीक्षा गरेर जारी राख्नुहोस्।
गुगलको आंशिक अपडेट सुविधाको लागि धन्यवाद, प्रयोगकर्ताहरूको निश्चित भागमा अद्यावधिकहरू पठाउन सकिन्छ।
यस तरीकाले, अपडेट वास्तविक वातावरणमा वास्तविक व्यक्तिहरूसँग परीक्षण गर्न सकिन्छ।
जब कुनै समस्या वा अपडेट आउँछ, यो अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई असर नगरी परीक्षण गर्न सकिन्छ।
यस सुविधाको लागि धन्यवाद, तपाईंले आवश्यक सुधारहरू गरेर आफ्नो APK पुन: अद्यावधिक गर्न सक्नुहुन्छ।
गुगल प्ले स्टोर नखुलेमा तपाईले लागू गर्न सक्ने7समाधानहरू;
तपाईंले समय समयमा गुगल प्ले स्टोर खोल्दा समस्याहरू सामना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं तल सूचीबद्ध समाधानहरू प्रयास गरेर आफ्नो आवेदन काम गर्न सक्नुहुन्छ।
१- मिति र समय सेटिङहरू
तपाईंले एन्ड्रोइड उपकरणमा मिति र समय सेटिङहरू जाँच गरेर समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। गुगलले समय समयमा प्ले स्टोरको लागि तपाइँको उपकरणको मिति र समय जाँच गर्दछ। वास्तविक समयसँग बेमेल हुँदा तपाईंको उपकरणसँग सिङ्क्रोनाइज गर्न कठिनाई हुन सक्छ। यस अवस्थामा, प्ले स्टोरले राम्रोसँग काम नगर्न सक्छ। तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा तपाईको उपकरणको सेटिङ खण्डमा जानु हो। सेटिङ्हरू खण्डबाट, प्रणाली सेटिङहरू खण्डमा जानुहोस्। मिति र समय समावेश गर्दछ। यन्त्र जडान भएको अपरेटरद्वारा मिति र समय सेटिङहरू स्वचालित रूपमा बनाइएको छ कि छैन भनी जाँच गरिन्छ। यदि स्वत: सेट बटन सक्रिय छैन भने, यो सक्रिय छ।
2- इन्टरनेट जडान
कहिलेकाहीँ तपाईंले अनुभव गरिरहनुभएको समस्याको स्रोत एक धेरै सरल विवरण, इन्टरनेट जडान विच्छेद हुन सक्छ। तपाईं मोबाइल डेटाबाट Wi-Fi वा Wi-Fi बाट मोबाइल डेटामा स्विच गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र समस्या समाधान भएको छ कि छैन भनी जाँच गर्नुहोस्।
3- क्यास र डाटा सफाई
यस विधिको लागि, सेटिङहरू खण्ड फेरि उपकरणमा खोलिएको छ। अनुप्रयोगहरू र सूचनाहरू क्लिक गरिएका छन्। यहाँबाट, सबै एपहरू देखाउनुहोस् चयन गर्नुहोस्। तल स्क्रोल गर्नुहोस् र गुगल प्ले स्टोर खुल्नेछ। भण्डारणबाट क्यास खाली गर्नुहोस् मा ट्याप गर्नुहोस्। त्यसपछि क्लियर डाटामा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो यन्त्र, गुगल प्ले स्टोर, डाउनलोड प्रबन्धकको लागि क्यास र डाटा सफा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले सफाई प्रक्रिया पछि आफ्नो डाउनलोड पुन: प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
4- एन्ड्रोइड प्रणाली अपडेटहरू
तपाईंको यन्त्रको सेटिङ खण्डबाट, प्रणाली> उन्नत> क्रमबद्ध प्रणाली अपडेट चरणहरूमा क्लिक गर्नुहोस्। यन्त्रमा प्रणाली अद्यावधिकहरू जाँच गरिन्छ। अप-टु-डेट एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको साथ, अनुप्रयोगहरू अझ सहज रूपमा चलाउन सकिन्छ।
5- गुगल प्ले स्टोर अपडेटहरू अनइन्स्टल गर्नुहोस्
एन्ड्रोइड उपकरणमा सेटिङहरू खण्ड खुल्छ। गुगल प्ले स्टोर एप्स र सूचनाहरूबाट खुल्छ। शीर्षमा रहेको अपडेटहरू अनइन्स्टल गर्नुहोस् बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि फ्याक्ट्री संस्करणमा फर्कन भनियो भने, तपाइँ ठीक भन्न सक्नुहुन्छ।
6- गुगल खाता हटाउनुहोस्
यन्त्रबाट सेटिङहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्। खाता बटन क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई हटाउन खाता भनिन्छ। यस कार्यले यन्त्रमा सम्पूर्ण Google खाता रिसेट गर्दछ। यो प्रक्रिया अघि, तपाईंले आफ्नो ब्याकअप अपरेशनहरू गरेको हुनुपर्छ।
7- कारखाना रिसेट
यदि माथि सूचीबद्ध सबै चरणहरू पूरा गरेपछि पनि समस्या रहिरहन्छ भने, तपाईंले फ्याक्ट्री रिसेट गर्न आवश्यक पर्दछ। तपाईँको उपकरणमा सेटिङ ट्याबबाट, प्रणाली> जगेडा र रिसेट चरणहरू पूरा भयो। रिसेट कारखाना सेटिङहरूमा क्लिक गर्नुहोस्।
मेटाइएको गुगल प्ले कसरी पुन: स्थापना गर्ने?
तपाईंले गल्तिले आफ्नो एन्ड्रोइड उपकरणबाट Google Play Store एप अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। केही भाइरस केसहरूमा, यसलाई मेटाउन सकिने सम्भावना छ। धेरै दुर्लभ अवस्थामा, यसले Google Play मेटाइएको त्रुटि पनि दिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, तपाईंले APK को रूपमा पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक छ। तपाइँ तपाइँको इन्टरनेट ब्राउजर मा Google Play खोजी गरेर कार्यक्रम डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले डाउनलोड प्रक्रियाका सबै चरणहरू यसलाई नछोडिकन नियन्त्रित रूपमा गर्नुपर्छ।
पहिले, एन्ड्रोइड उपकरणमा सेटिङ सेक्सन प्रविष्ट गर्नुहोस्। अर्को चरणमा, तपाईंले सुरक्षा खण्डमा अज्ञात स्रोत बटन सक्रिय गर्न आवश्यक छ। खोज इन्जिन मार्फत गुगल प्ले स्टोर लिङ्कको साथ खोज गरिन्छ। तपाईंले आफ्नो फोनमा खोज परिणाम APK फाइल डाउनलोड गर्न आवश्यक छ। प्ले स्टोर डाउनलोड प्रक्रिया सुरु हुन्छ। डाउनलोड पूरा भएपछि, तपाईंले APK फाइल खोलेर स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक छ। यस तरीकाले, तपाइँ तपाइँको उपकरणमा कार्यक्रम पुन: डाउनलोड गर्नुहुनेछ।
गुगल प्ले कसरी सक्रिय गर्ने?
गुगल प्ले स्थापना प्रक्रिया पूरा भएपछि यो सक्रिय हुन्छ। तपाइँ तपाइँको जीमेल खाता प्रविष्ट गरेर पहिले जस्तै कार्यक्रम प्रयोग गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ तल सूचीबद्ध चरणहरू पछ्याएर सक्रियता प्रक्रिया प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ।
पहिले, उपकरणको सेटिङहरूमा जानुहोस्।
सेटिङ्हरूमा रहेको एप्लिकेसन प्रबन्धक बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
गुगल प्ले स्टोर एप्लिकेसन प्रबन्धक खण्डमा पाइन्छ।
Google Play Store मा क्लिक गर्नुहोस्।
देखा पर्ने पृष्ठमा, सक्रिय बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
जब माथिका कार्यहरू क्रमबद्ध रूपमा पूरा हुन्छन्, सक्रियता प्रक्रिया हुन्छ। यो तपाईंको एन्ड्रोइड उपकरणमा एप्स स्क्रिनमा फर्कन्छ। अपडेटहरू पनि गएका छन् किनभने प्ले स्टोर मेटाइयो वा हटाइयो। पछिल्लो संस्करण अपडेट प्रक्रिया पूरा गरेपछि, Google Play Store प्रयोगको लागि तयार हुन्छ।
फाईल आकार: 24.54 MB